Bayern Munich iyo Sevilla ayaa ku kulmi doona ciyaarta kama dambeysta ee European Super… – Hagaag.com
Bayern Munich iyo Sevilla ayaa ku kulmi doona ciyaarta kama dambeysta ee European Super…
Posted on 24 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Bayern Munich ayaa ku guuleysatay horyaalka Champions League Axadii, iyadoo 1-0 ku garaacday Paris Saint-Germain finalka, kaasoo lagu qabtay caasimada Portugal ee Lisbon.
Bayern Munich ayaa koobkan u ah kii 6aad ee ay ku guuleystaan.
Inkastoo PSG ay heleen fursado badan oo gool ku dhalin kareen hadana sidaasi ayey ku dhamaatay, waxayna PSG u aheyd markii ugu horeysay taariikhdeeda oo ay timaado finalka Champions League, runtii waxay muujiyeen dadaal ay ku guuleysan kareen.
Sevilla ayaa iyaduna ku guuleysatay horyaalnimada Europa League Jimcihii, iyagoo finalka 3-2 kaga badiyay Inter Milan.
Kooxda Bayern ayaa kula kulmi doonta kooxda Seville ee ka dhisan Spain bisha September 24 garoonka Puskas Arena ee caasimada Hungary ee Budapest, si midkood ugu guuleysto ​​horyaalnimada Yurub ee European Super Cup.
Ciyaarta finalka ee European Super cup ayaa la filayay in lagu qabto Porto ee dalka Portugal, bishan August 12da, laakiin dib u dhac ku yimid dhamaadka xilli ciyaareedkan heerka maxalliga ah iyo kan Yurub sababo la xiriira cudurka coronavirus ayaa sababay in Super Cup-ka loo wareejiyo magaalada Budapest bisha September 24da ee soo socota.
Guddiga fulinta ee Midowga Yurub ee ciyaaraha (UEFA) ayaa siiyay xaqa ay ku martigalin doonaan kulanka Super Cup ee Hungary sababa la xiriira qalalaasaha Corona, sida ay u siisay martigelinta wareegii ugu dambeeyay ee tartamada Yurub ee Champions League waqooyiga Rhine-Westphalia ee Jarmalka, waxaana ay xaq u siisay inay martigeliso wareegyada finalka Champions League magaalada Lisbon ee Portugal.